Global Voices teny Malagasy » Mandray ny asa maha-filohampirenena azy i Ebrahim Raisi, mitombo ny famoretana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Aogositra 2021 10:57 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Candy
Sokajy: Iràna, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Ebrahim Raisi nandatsaka ny vatom-pifidianany tao amin'ny maoske Ershad tamin'ny 18 Jona 2021. Sary an'i Maryam Kamyab  (CC BY 4.0) 
Nosoratan'i Naveed Sadeghi
Ny 5 Aogositra teo ny Repoblika Islamikan'i Iràna no nanokana ny filohany faha-8.
Ebrahim Raisi, lehiben'ny fitsaràna fahiny tao Iràna, sady lehiben'ny sampandraharaham-pitsaràna ao anatin'ny fitondràna, no nandresy tamin'ny fifidianana ho filohampirenena  natao ny 18 Jona. Fandresena niezinezina.
Betsaka ireo mpanaramaso, na tao Iràna izany , na avy any ivelany, no tsy gaga tamin'ny fandresen'i Raisi. Talohan'ny fandatsahambato, noraisin'ny fitondràna daholo izay fepetra rehetra hiantohana ny fandresen'ilay Lehiben'ny Fitsaràna tamin'ilay fifidianana. Herinandro vitsy monja talohan'ny fifidianana, ny Filankevitry ny Mpiambina Faratampony ao Iràna, andrim-panjakana iray eo ambany fifehezan'ny Mpitarika Farantampony, Ali Khamenei, dia nanilika malaky sy tsy nifampidinihana  ny ankamaroan'ireo mpanohitra an'i Raisi tsy ho afaka hofidiana, isan'ireny ireo kandidà marobe mpitaky fanovàna izay nahazo tohana avy amin'ny vahoaka nandritra ireo volana maro tany aloha.
Tsy tena azo ambara ho voafidy fa napetraka i Raisi. Ny tombony amin'ny maha-avy ao anatin'ny fitondràna azy dia nahatonga azy ho ny mpirotsaka idealy ho an'ireo Ayatollahs. Izay mihitsy, tsy misy mihitsy angamba olona mbola velona amin'izao fotoana izao ka hoe nandray anjara betsaka tamin'ny milina fitantanana an'i Iràna ankoatra an'i Ebrahim Raisi. Tany amin'ny faha-20 taonany no nanomboka ny dingana nodiaviny i Raisi fony izy nanomboka niasa  tao anatin'ny rafi-pitsaran'ilay governemanta vao teraka, rantsana iray izay, indray andro any, izy no hitantana azy. Taorian'ny nandraisany anjara tamin’ ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 1979 izay nanesorana ny Shah  tsy ho eo amin'ny fitondràna, voalaza fa i Raisi no tsinjon'ireo mpiaramiasa akaiky tamin'i Ruhollah Khomeini , ilay mpanorina ny Revôlisiôna. Vetivety foana izy dia voatendry hitàzona ireo toerana ambony, mpampanoa lalàna, teny anivon'ny sehatra monisipaly sy, taty aoriana kely, tany amin'ny faritra. Tany amin'ny fifarànan'ny andian-taona faharoapolony, efa lefitry ny mpampanoa lalàna sahady i Raisi, tao Teheran renivohitry ny firenena.
Ireny taona voalohany ireny no nisava làlana ireo andiany marobe tamin'ny tantaran'i Raisi, nampiasàny ny Firenena Miaramila mba hamoretana ny vahoaka iraniàna. Raisi izy tenany mihitsy no nanara-maso ireo tranga tsy tambo ho isaina nahavoarohirohy ireo mpanohitra ara-pôlitika sy ireo mpikatroka mpankahala ny fitondràna, nampihatra sazy henjana be, isan'izany ny fanameloha ho faty. Marobe ireo vavolombelona nanatri-maso  manamafy ny fanatrehan'i Raisi sy fijoroany rehefa nisy ny fampijaliana sy ny fitetehana (fanapahana) ireo gadra pôlitika nogadrain'ny rantsam-pitsaràna teo ambany fiadidiany, maro tamin'ireny no zaza amam-behivavy. Tonga tamin'ny faratampony ny traikefa naha-mpampanoa lalàna azy tao anatin'ireo heloka bevava faran'izay nalaza ratsy, ny nandraisany anjara tamin'ilay fandripahana tamin'ny 1988,  namonoana an-tsokosoko nandritra ny herinandro maro, ireo gadra an'arivony maro avy amin'ireo vondrona tsy tia ny fitondràna. Araka ny lazain'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona nanao fanadihadiana an'ilay tranga, Raisi, teo amin'ny faha-28 taonany, no isan'ireo olona efatra  izay namoaka ny didy tsirairay fanamelohana ho faty. Araka ny voalazan’ireo mpivadika tamin'ny governemanta iraniàna , niteraka fahafatesana hatramin'ny 30.000 ilay fandripahana, an'arivony maro tamin'izany no niaritra fampijaliana sy endrika herisetra maro hafa izay nahatonga ny maro tamin-dry zareo ho kilemaina mandrakizay.
Miaraka amin'io tarehimarika voaporofo io, mazava be ny antony nisafidianan'ireo Ayatollahs an'i Raisi hitarika ny governemanta iraniàna. Raha lazaina tsotra, lasa manampahaizana manokana amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana i Raisi ho entina mamoritra ireo mpanohitra sy mamoritra ny hetsik'ireo mpikatroka mpankahala ny fitondràna. Araka ny notsipihan'ny People's Mujahedin Organization  (PMO), vondrona Iraniàna mpanohitra miorina ao Parisy, voarohirohy nivantana  i Ebrahim Raisi tamin'ireo hetsika tsirairay nisy famoretana nataon'ny fanjakàna tao Iràna tato anatin'ny taompolo telo farany.
Tato anatin'ny vanimpotoana faramparany fotsiny, raha nitombo hadiry sy hamafy teny anivon'ny vahoaka iraniàna ireo hetsipanoherana manerana ny firenena, i Raisi no teo amin'ny fitantanana ny firaisana tsikombakomban'ny mpitandro filaminana sy ny fitsaràna mba hamoretana an-kerisetra ireo hetsika mpanohitra ny fitondràna. Raisi no tao ambadiky ny tantara ratsin'ny fampijaliana tao Kahrizak  tamin'ny 2009, tamin'izany ireo mpikatroka voarohirohy tamina hetsipanoherana nanerana ny firenena nanohitra ny voalaza fa fisian'ny kolikolim-pifidianana dia nogadraina sy nampijaliana tany amin'ny toby famonjàna tao Kahrizak any avaratr'i Iràna. Efa niandry ho tamin'ny 2016 ny fitondràna vao niaiky tamin'ny fomba ôfisialy ny fisian'ilay tranga.
Amin'ny maha-lehiben'ny Fitsaràna azy, toerana izay notazoniny mandra-pahavoafidy azy ho filohampirenena, Raisi izy tenany no nanara-maso manokana ireo famonoana ho faty an-jatony maro, isan'izany ny an'ireo olona 251 tamin'ny 2019, ary 267 tamin'ny 2020, ary famonoana ho faty am-polony maro nandritra ity taona hifarana ity. Araka ny itateran'ny  Amnesty International azy, teo ambany fitantanan'i Raisi, “tena nitombo be ny fampiasàna ny fanamelohana ho faty, natao ho fitaovampiadiana famoretana ara-pôlitika hamelezana ireo mpanao hetsipanoherana sy ireo mpikambana avy amin'ireo vondrom-poko vitsy an'isa.” Tranga iray niavaka niteraka antsoantso erantany ny famonoana feno heristra  an'i Navid Afkari, ilay Iraniàna mpanao fanatanjahanten, taranja tolona, izay nohelohina ho “niady tamin'ny fitondràna” noho izy nandray anjara tamin'ireo hetsipanoherana manohitra ny governemanta.
Tamin'ny 2019, fotoana niatrehan'i Iràna ny andiana korontana goavana indrindra hatramin'ny nisian'ny Revôlisiôna, i Raisi no teny amin'ny lohalaharana mba hiantoka ny famoretana amin-kerisetra ireo vondrona mpikatroka. Niaraka niasa tamin'ireo rantsan'ny pôlisy sy ireo mpiambina ivelan'ny tafika izy, nanome azy ireny fahalalahana tanteraka hampiasa izay fitaovana rehetra ilaina hamoretana ireo mpanao fihetsiketsehana  ary hanakiviana bebe kokoa ny fikatrohana. Teo ambany taridalan'i Raisi, an'arivony ireo lehilahy, vehivavy, ankizy no tratry ny fisamborana faobe, ary marobe no nandalo fampijaliana, tratry ny fanjavonana an-tery sy ireo fomba fikarakaràna hafa filàmbaniny sy mahery setra.
Ny hafatra mazava alefan'ny “fahalanian” i Raisi dia ny fikasàn'ny fitondràna hanamafy hatrany ny tetikadiny famoretana. Araka izay nosoratan'ny  PMO tao anatin'”ny famoahany vao haingana, tsy maintsy tohizan'ny fitondràna ny famoretany satria fantany fa “tsy misy fomba hafa hitazonana ireo tsy mitovy hevitra aminy”. Ny tahotra tsy miato ao anatin'ireo Ayatollahs hoe sao hisy fitroarana hafa indray  no mitondra amin'ny tsy maintsy ilàna ny fanaovan'ny fanjakana herisetra sy habibiana.
Nataon'ny fitondràna mazava tsara ny toerana noraisiny. Ary miaraka amin'ny fiakaran'i Ebrahim Raisi eo amin'ny fitondràna, vao mainka hihahenjana fotsiny izao ny habibiana sy ny famoretana avy amin'ny fanjakàna.
Naveed Sadeghi dia mpanao gazety miasa tena, miresaka momba ny zon'iolombelona ary monina ao Londona, mahay manokana ny raharaha Iraniàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/08/30/153941/
 Maryam Kamyab: https://www.mehrnews.com/photo/5237622/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
 (CC BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
 nandresy tamin'ny fifidianana ho filohampirenena: https://www.cbsnews.com/news/iran-election-2021-ebrahim-raisi-wins-low-turnout/
 dia nanilika malaky sy tsy nifampidinihana: https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/irans-guardian-council-disqualifies-most-presidential-candidates
 fony izy nanomboka niasa: https://www.aljazeera.com/news/2021/6/19/who-is-ebrahim-raisi-irans-next-president
 Ruhollah Khomeini: https://en.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
 ireo vavolombelona nanatri-maso: https://iran-hrm.com/2021/07/10/ebrahim-raisi-tortured-pregnant-woman-farideh-goudarzi/
 fandripahana tamin'ny 1988,: https://en.wikipedia.org/wiki/1988_executions_of_Iranian_political_prisoners
 isan'ireo olona efatra: https://www.iranhumanrights.org/2017/04/nasrin-sotoudeh-investigate-iranian-presidential-hopeful-ebrahim-raisi-for-1988-mass-executions/
 ireo mpivadika tamin'ny governemanta iraniàna: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/1321090/Khomeini-fatwa-led-to-killing-of-30000-in-Iran.html
 People's Mujahedin Organization: https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Mujahedin_of_Iran
 voarohirohy nivantana: https://mek-iran.com/2021/05/15/mek-iran-raisi-stepped-in-election/
 tantara ratsin'ny fampijaliana tao Kahrizak: https://www.iranhumanrights.org/2016/09/saeed-motazavi-kahrizak/
 famonoana feno heristra: https://edition.cnn.com/2021/06/28/sport/navid-afkari-cmd-spt-intl/index.html
 hamoretana ireo mpanao fihetsiketsehana: https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/
 tahotra tsy miato ao anatin'ireo Ayatollahs hoe sao hisy fitroarana hafa indray: https://mek-iran.com/2020/05/18/mek-iran-iranian-regimes-fear-of-another-uprising/